Ooredoo ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် M ပိုက်ဆံရဲ့ နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ် | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
Ooredoo ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် M ပိုက်ဆံရဲ့ နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်
လူတိုင်းလူတိုင်း ပျော်ရွှင်တတ်ကြပြီးနေလို့ထိုင်လို့အကောင်းဆုံးလကို ပြောပါဆိုရင်တော့ ဒီဇင်ဘာလပဲပေါ့နော် .. ဒီဇင်ဘာလဟာ နှစ်သစ်နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးလဖြစ်သလို ခရစ္စမတ်တို့ New Year တို့နဲ့ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ လတစ်လပေါ့ ..အဲ့ဒီထဲမှာမှ ဟန်နီကလည်း လူငယ်ပီပီအကြိုက်ဆုံး ဒီဇင်ဘာလရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကို ပျော်ရွှင်နေတာပေါ့ .. ဒီနေ့တော့ ရာသီဥတုအေးအေးလေးမှာ အိမ်ထဲမှာပဲ ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ဇိမ်ကျနေချင်မိတယ် .. ဇိမ်ကျနေရင်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ ဘာတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလည်း သယ်ရင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ရမယ် . အဲတော့ အင်တာနက်လေးဖွင့်ဦးမှပါပဲ .. အင်တာနက်ဖွင့်တာနဲ့ သယ်ရင်းတွေနဲ့ မပြောခင် အရင်ဆုံးငါသုံးနေကျ Ooredooရဲ့ ဘာအစီအစဉ်လေးများ Customer တွေကိုပေးမလဲ ကြည့်ဦးမှပါ ..ဟော် …တွေ့ပြီတွေ့ပြီ .. အဲဒါတွေကြောင့် Ooredooသုံးရတာ စိတ်ချမ်းသာတာပဲ…ဒီလိုအေးစိမ့်နေတဲ့ ရာသီဥတုလေးမှာ အိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုံးထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ကို ထွက်စရာမလိုတော့ဘူးနော် အမျိုးတို့ရေ…ဟန်နီကတော့ သိပ်ကိုပျော်မိပြီလေ ..ပျော်ဆို နှစ်သစ်ကူးမှာသုံးဖို့ ပိုက်ဆံလေးတွေ ရပြီလေ .. Wow Come Come Money Money…….
ပျော်ရတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Ooredooရဲ့ M ပိုက်ဆံကြောင့်ပဲလေ…Ooredooရဲ့ M ပိုက်ဆံဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ မစိမ်းတော့ပါဘူး…. မျက်မှောက်ခေတ်လို တိုးတက်လာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ အခုလို အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ M ပိုက်ဆံဆိုတာ ဟန်နီတို့အတွက်တော့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ application လေးတစ်ခုပါပဲ ..
M ပိုက်ဆံကို အသုံးပြုရင်းနဲ့ သိန်းပေါင်း (၅၄၀) ကျော် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ဆုကြေးငွေတွေကိုရယူနိုင်ပြီလေ ..ဟန်နီကတော့ ကံစမ်းရတော့မှာပဲ .. အိုကွယ် ကျေနပ်တယ် …ဒီလိုကျေနပ်နေချိန်ကျမှ ကတောင် ကတောင်နဲ့ messenger ကနေပြီး အရှုပ်ထုပ် အိဖြူမ စကားလာပြောနေပြန်ပီ ..ဟဲ့ ဘာဖြစ်နေတာလဲပြော .. အေးဟန်နီရေ ငါတို့ နှစ်သစ်ကူး ဘာတွေလုပ်ကြမလဲ .. အေးလုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ပိုက်ဆံလိုတယ် အိဖြူရဲ့ .. အဲဒါကို စဉ်းစားနေရင်းနဲ့ ငါတို့အတွက် ပိုက်ဆံရမယ့် အခွင့်အရေးလာပြီ…ဟယ် ဟုတ်လား ဘာအခွင့်အရေးလဲ… M ပိုက်ဆံပေါ့ …ဟင် အဲဒါကဘာလဲသိဘူး…အယ် အိဖြူရယ် နင်ကလည်း ခေတ်နောက်ကျလိုက်တာ ..M ပိုက်ဆံတောင် မသိဘူးလား ..ပြောပြမယ် နားထောင် ကံထူးရှင်ဖြစ်ပီး နှစ်သစ်ကူးရအောင်လို့ …ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ application တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ် .. ဟယ် ဟုတ်လား အဲဒါကဘာတွေ ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ ငါ့ကိုပြောပြပါဦးသူငယ်ချင်းရယ် .. အေးပြောပြမယ် .. နင့်ဆီမှာရှိရမှာက ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ အော်ရီဒူးဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုပဲ .. ဒါကတော့ မခက်ပါဘူး .. အခုလက်ရှိ နင်ကိုင်နေတာကလည်း အော်ရီဒူးဖုန်းနံပါတ်ပဲလေ…အဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာတော့ M ပိုက်ဆံဆိုတဲ့ application ရှိရမယ်ဟယ် …မရှိရင်တော့ *999# ကိုခေါ်ဆိုပြီး ဒေါင်းလို့ရယ်
…အော်အဲဒါလား အိဖြူဆီမှာရှိတယ် ဟန်နီ .. အေး အခုအဲ့ M ပိုက်ဆံ အသုံးပြုသူတွေအတွက် ကံထူးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရှိတယ် ..ဟယ် ဟုတ်လား ငါမသိသေးပါလား ပြောပြပါဦး မတ်မတ်ဟန်မီရယ် .. အေးအေးပြောပြမယ် နင်ကံထူးပြီး ပေါက်သွားရင်တောင် ငါ့ကို တစ်ဝက်ပေး ဟုတြ်ပီလား.. ဟီးဟီးဟုတ်ပါပြီပေးမယ်နော် .. ကဲနားထောင်ပြောပြမယ် …နင်အဲ့အစီအစဉ်မှာ ပါ၀င်နိုင်ဖို့ဆိုရင် M ပိုက်ဆံထဲက ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုခုကိုတော့ အသုံးပြုရမယ်။ ဟင် ဟုတ်လား ဘာတွေသုံးရမှာလဲ ..ဘာတွေ သုံးရမလဲဆိုတော့ ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်၊ ငွေလွှဲ၊ ငွေပေးချေခြင်းနှင့် CB ဘဏ်အကောင့်မှ M ပိုက်ဆံအကောင့်ကို ငွေလွှဲခြင်းအစရှိတဲ့ ဟာတွေကို အသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ နင်ကံစမ်းလို့ရပြီလေ။
ကံစမ်းရမယ့် ကာလကတော့ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့ပီးတော့ ဇန်နဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့ထိဆိုတော့ (၁) လတောင် ကံစမ်းလို့ ရတာပေါ့ဟယ် .. Ooredoo က နေ့စဉ် အပတ်စဉ် ကံထူးရှင်တွေကိုရွေးချယ်ပေးသွားမယ်နော် ..နင် နေ့စဉ်ကံထူးရှင်ဖြစ်ပြီးရင်လည်း အပတ်စဉ်ဆုငွေတွေလည်း ကံထူးနိုင်သေးတယ် .. ဟယ် ဟုတ်လား ပျော်စရာကြီးနော် ဟန်နီ .. ဒါဆို အိဖြူတို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နှစ်သစ်ကူးကြတာပေါ့ .. အေးပါ နေပါဦး အိဖြူရယ် ဟန်နီဆက်ပြောပြဦးမယ် .. နေ့စဉ်ကံထူးရှင်က အယောက် (၂၀၀) တောင် ကံစမ်းပေးမှာနော် ..ကျပ် (၅၀၀၀၀) ဆုကအယောက် (၂၀) ၊ ကျပ် (၁၀၀၀၀) ဆုကအယောက် (၃၀) ၊ ကျပ် (၅၀၀၀) ဆုကအယောက် (၅၀) နဲ့ ကျပ် (၂၀၀၀) ဆုကအယောက် (၁၀၀) တဲ့ .. ကဲနေ့စဉ် (၂၀၀၀) ပဲ ပေါက်ဦးအိဖြူရယ် ငါတို့ သုံးရတာပေါ့ ..အေးနော် .. အပတ်စဉ်ဆုကကော .. အပတ်စဉ်ဆုကတော့ တစ်ပတ်ကိုတစ်ယောက် ကံစမ်းပေးမှာလေ .. ကံထူးမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ ဆုငွေကျပ် (၅) သိန်းတောင် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဟ ..မိုက်ချက်ပဲနော် .. ကဲအဲ့ဒီတော့ကာ အိဖြူရေစဉ်းစားမနေနဲ့ ငါတို့ နှစ်သစ်ကူးမှာပျော်ရွှင်ရအောင် M ပိုက်ဆံကို အသုံးပြုပြီး ကံစမ်းလိုက်ကြတာပေါ့ အိုစကေအိုစကေ နှစ်သစ်ကူးအတွက် M ပိုက်ဆံနဲ့ ကံစမ်းလိုက်ပြီနော် …